SomaliaReport: MV Leila La Afduubay oo Soo Gaaray Baargaal
“Burcad badeeda iyo markabka ayaa soo galay sakaa subaxnimadii hore. Waxaa saran shaqaale 24 oo kasoo jeeda wadamo kala duwan, qaarkood waxay kasoo jeedaan Panama,” Cabdicasiis Wali oo ah sarkaal degaanka Baargaal ayaa Somalia Report usheegay.
Ganacsade reer Berbera ah oo ku sugan gobolka goostay ee Somaliland oo la filayey in markabku kusoo xirto intaan la afduubin ayaa xaqiijiyey warkaas.
“Way soo gaareen Baargaal. Waxaan la xiriirnay oo naakhuudayuushu way nabad qabaan. Waxaan bilowna la gorgorton anagoo adeegsaneyna cuqaasha degaanka, ganacsatada Puntland iyo saraakiisha degaanka,” nin ganacsade ah oo aan ismagacaabin ayaa Somalia Report usheegay.
Dadka degaanka ayaa ka cawday imaansha markabka.
"Waxaan si qayaxan burcadda ugu sheegnay inaan lagu soo dhaweyneyn Baargaal, laakiinse dhaguhu uma furna. Way dhaga la’yihiin oo isla qabweyn yihiin. Waxa keliya oo ay yaqaanaan falka xaaraanta ah. Burcada laguma soo dhaweynayo Baargaal. Waa tuugo, waa in gacmaha laga jaro sida Alle ku sheegay kitaabka Quraanka," waxaa yiri Cusmaan oo ah cuqaaal degaanka Baargaal.
Sida saraakiisha Puntland sheegeen, dhawaan ayey boliiska Puntland 11 burcadbadeed kasoo qabteen tuulada Gabac oo udhow Eyl kadib markay fuliyeen falal la dagaalanka burcad badeedka ee gobolka Nugaal.
Intuusan soo gaarin Baargaal, goobtii ugu danbeysey ee uu ku sugnaa waa 16.47 N-056. 15E, ee irrida bari ee Gacanka Cadan, kuna socday xawli 260 ee 4 knots, sida laga soo xigtay Xarunta Badbaadada Badaha ee Geeska Africa (Maritime Security Center Horn Of Africa - MSCHOA). Markabka waxaa la sameeyey 1973 waxaana leh oo ku shaqeeya New Port Cargo & Shipping of Dubai, ee Midowga Imaaraadka Carabta.